KAUNG MYAT SOEFollow
မြန်မာအလှမယ် ဟန်သီ ဆု ၂ ခု ရရှိ
ပိုလန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Supranational 2014 ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာကိုယ်စားပြု အလှမယ် ဟန်သီက အာရှကိုယ်စားပြု အလှမယ်ဆုနဲ့ Miss internet ဆုတွေကို …
မင်းနေပြည်ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ အညီ ပေးထားတဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်နဲ့ ....
တစ်ပြည်လုံး အတွက် သုံးစွဲခွင့်ရှိတဲ့ အင်တာနက် ပမာဏကို မင်းတို့ အခြေစိုက်ရာ နေပြည်တော်နဲ့ တစ်ထီး တစ် နန်းဖြစ်နေတဲ့ ဘန်ကာထဲက စစ်တပ်ပိုင်း အတွက် …
Peter Crouch scored the first of Stoke's three first-half goals after 19 seconds - the quickest in the #BPL this season.
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ နည်းပြ မော်ရင်ဟို ဟာ စိန့်ဂျိမ်းပတ် ကွင်း တွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရမှုသည် မထိုက်တန်ကြောင်း နှင့် နယူးကာဆယ်အ သင်း၏
ပထမပိုင်းမပြီးခင်ကလေးမှာ စတုတ်က အာဆင်နယ်ကို တတိယဂိုးသွင်းယူလိုက်ပြီး ၃ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ဦးဆောင်နေပါတယ်။ လစ်ဗာပူးလ်-ဆန်းဒါးလန်း၊
Good Night From Mandalay Popular Journal Asian Fame Media Group Image by Narcissus
Good Health No 516 DOWNLOAD :
Pyimyanmar Journal No 950 DOWNLOAD :
ယီမန်နိုင်ငံမှာ အဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အမေရိကန်ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် Luke Somers ကို အမေရိကန်Commando တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကယ်ဆယ်စဉ်မှာပဲ အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Luke …
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဖက်ကနေ အင်အားပြင်း Typhoon မုန်တိုင်းကြီး စတင်ဝင်ရောက်နေတာနဲ့အတူ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး လေပြင်းတိုက်နေတဲ့အတွက် …
ကမ္ဘာ့ကုခံအားကျဆင်းမှု ကူးဆက်ရောဂါတုိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွင် ဆီမီးထွန်းကာ သရုပ်ဖော်နေသည့်
Manchester City vs Everton team sheet
Manchester City vs Everton Etihad Stadium Premier League Saturday, December 6. Kick-off: 17:30 The teams Manchester City XI Hart, Zabaleta, Clichy, …
အာဆင်နယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီး စပါးနဲ့ လီဗာပူးလ် အသင်းတို့ အိမ်ကွင်းတွေမှာ သရေကျတဲ့ (၉း၃၀) ပွဲစဉ်များ ပွဲပြီးရလဒ် ------------------------------------------------------------------
Metal Slug3coming to PlayStation4next year
Metal Slug 3, the iconic run-n-gun title SNK first launched in 2000, will be coming to all current PlayStation platforms in 2015, with the possibility of additional Neo-Geo titles to follow in observance
Pelissero: Adrian Peterson still has long career in mind
If Adrian Peterson loses his appeal, the banished Minnesota Vikings star won't play another game before his 30th birthday in March, barringarapid and successful legal challenge. But Peterson doesn't
Oregoncommitted 11 first-half penalties and quarterbackMarcus Mariotawas definitely off his game. The players belonging to the team many thought was national championship-ready sulked into the locker looking
Tiger Woods improves as Jordan Spieth leads in Florida
Yankees sign reliever Miller, trade for Gregorius
The Yankees are heading to the Winter Meetings as noisemakers, having created ripples withabusy Friday afternoon that saw them sign left-handed …
The videotaped deposition of Apple’s late co-founder Steve Jobs was played in court today as part of the ongoing antitrust lawsuit involving the iPod, iTunes, and digital rights management. As CNET reports,